नर्वेलीयन फजर्डहरू के हुन्? | यात्रा समाचार
सबै व्यक्तिहरू म चिन्छु जसले क्रूज गरेका छन् नर्वेली फजर्ड्स उनी चकित भइन्। प्रकृति यसको सब भन्दा सुन्दर र डरलाग्दो अभिव्यक्ति मध्ये एकमा। तर एक fjord के हो?, यो कसरी गठन हुन्छ, यसको के विशेषताहरू छन्, त्यहाँ कती छन्, कुन हामी भेट्न सक्दछौं?
ती सबै प्रश्नहरूको उत्तर आज नर्वेलीय फजर्डहरूमा यस विशेष लेखमा दिइन्छ। भ्रमण गर्नु!
1 यो fjords
2 नर्वेलीयन फजर्ड्स
3 Fjords र अधिक
पहिले, यो सही तरिकाले व्याख्या गर्न लायकको छ fjord को मतलब के हो: यो एक संकीर्ण, तटीय समुद्री इनलेट हो जुन कुनै हिमनदीले पूरै वा आंशिक रूपमा हिमनदी बाढीले उत्खनन गर्दा गठन हुन्छ।। भन्नुपर्दा, हिमनदी भाषाहरू जसले शताब्दियौंदेखि परिदृश्यलाई आकार दिइरहेका थिए। पानी, जब यो चिसो तापमानमा पुग्छ, धेरै फ्र्याक्चरहरू सिर्जना गर्दछ र यू यू अक्षरको आकारमा डुबाइएको उपत्यका बनाउँछ, जुन पानीको एक भाग माथि र अर्को मुनि यसको मुनि हुन्छ।
सामान्यतया fjords तिनीहरू धेरै गहिरो छन्ती हजारौं मिटर भन्दा गहिरो हुन सक्दछ, तटको सबैभन्दा अन्तर्देशीय भागमा महत्त्वपूर्ण गहिराईहरू दर्ता गर्न। हिजोखाना भएको ठाउँमा फजर्डहरू फेला पर्दछ त्यसैले तिनीहरू विश्वभरि नभई उत्तरी गोलार्धको अक्षांश than० भन्दा बढी र दक्षिणी गोलार्धमा lat० अक्षांशबाट माथि उचाइका क्षेत्रहरूमा छन् भन्ने छैन। नर्वेमा, उदाहरणका लागि, वा चिलीमा, विश्वको अर्को तर्फ।
अन्त्यमा, समुद्री अनुहारको फोजोरडको अंश "fjord को मुख" को रूपमा चिनिन्छ, र भित्री भाग समुद्रको तल्लो हो। यदि भौगोलिक गठन लामो भन्दा फराकिलो छ भने, यो fjord होइन खाडी वा लोभी हो। फजोर्डहरू एकदम शान्त छन् र यो त्यहि हो जुन पुरानो हिमनदीको पाखुराको अगाडि ढु stones्गा र बजरी र बालुवा जम्मा गरिएको थियो जुन समयको साथमा पनडुब्बी अवरोध पनि बन्यो। यो सुविधा fjords मा पनि परिणत भएको छ प्राकृतिक बन्दरगाह.
केहि थप डाटा: युनेस्कोले दुई नर्वेलीय फजार्डहरूलाई विश्व सम्पदाको सूचीमा समावेश गर्‍यो र गल्फ स्ट्रीम र कोरियोलिस प्रभावले उत्पादन गरेको हावा प्रवाहका लागि धन्यवाद, जलवायु अपेक्षाकृत शीतोष्ण र लगभग बरफ मुक्त छ।
नर्वेमा धेरै fjords छ, केहि अरू भन्दा प्रसिद्ध। हामी तिनीहरूलाई ध्यान दिन सक्छौं आठ fjord त्यसोभए उनीहरूलाई चिन्नुहोस्। सबै भन्दा पहिले हामीसँग छ Lysefjord, पश्चिमी नर्वेको fjord को दक्षिणी भाग। यो एक धेरै लोकप्रिय गन्तव्य हो र दुई छ सुन्दर vantage पोइन्ट्स, प्रसिद्ध Preikestolen र Kjerag।
यो पछि हुन्छ Hardangerfjordबर्गनको दक्षिणी भाग, यो वसन्त inतुमा र स्याउको रूखले भरिएको पहाडको साथमा एक खास राष्ट्रिय चित्र हो। यसमा दुई अफशूटहरू छन्, दुई हतियारहरू, धेरै लोकप्रिय, ईदफजोर्ड र सर्फजर्ड, र यसले १ 179। किलोमिटरसम्म विस्तार गर्दछ।
El Aurlandfjord यो Sognefjord को एक हात हो, साँघुरो र भारी रूख, र फ्लेम नामको एक सुन्दर गाउँ छ। उच्च-गति ट्रेन आउँदैछ त्यसैले यो पर्यटन गन्तव्य हो। यो सूची पछि यो एक हो कि विश्व विरासत को सूची एकीकृत, एक Naeroyfjordकेहि कुनामा कम्तिमा २ 250० मिटर मात्रको यस साँघुरो बाटोको साथ। यससँग ठाडो पर्वतीय पर्खाल र झरनाहरू छन्, केवल १ kilometers किलोमिटर लामोमा एउटा सुन्दर पोस्टकार्ड।
Sognefjord 'fjords को राजा' हो। यो सब भन्दा लामो २०० २०० को छ र यसको गहिराइमा १,200०1.308 मिटर गहिरो छ। यो पनि फरास्डे फजार्डहरू मध्येको हो र यसका धेरै शाखाहरू छन् जुन मुख्यबाट खोल्दछन्।
त्यहाँ झरना हेर्न पनि छ Geirangerfjord, विश्व विरासत। छेउमा ठाडो पहाडहरू, हिमफ्लाक र धेरै झरनाहरु संग सजाइएको, केहि तथाकथित को रूप मा धेरै लोकप्रिय सात बहिनीहरू, Friaren वा दुलहा पर्दा.
एक नाटकीय fjord को लागी हामीसँग छ Hjorendfjord। यो गन्तव्यको थोरै पर्यटन द्वारा भ्रमण गरिएको हो र यो यसको प्रकृति र यसको साना गाउँहरूको लागि बाहिर खडा छ। यो kilometers 35 किलोमिटर लामो छ। यसको प्रकृतिका लागि परिचित अर्को fjord हो Romsdalsfjord किनकी यसको तटमा असंख्य टापुहरू र पहाडहरू छन् जुन तिनीहरूको ठाडोताको लागि चम्किन्छ। यहाँ तीन प्रख्यात पर्यटन स्थलहरू छन्: ट्रोलस्टिगेन पर्वतीय सडक, एन्डल्सनेस शहरको दृश्य, रैम्पस्ट्रेकेन, र रोमस्डल्गेन आरोहण मार्ग।
एक fjord धेरै गर्मी परिभ्रमण द्वारा भ्रमण ट्राल्फल्फर्ड हो लोफोटेन क्षेत्रमा। यो केवल १०० मिटरको दूरीमा छ र मात्र kilometers किलोमिटर लामो छ। म्याट डामनको फिल्म, आकार घटाउँदै (एउटा जहाँ मानिस लघु छ), यहाँ चित्रित थियो।
Fjords र अधिक
यो केवल fjords को बारेमा मात्र होईन गाउँहरु त्यहाँ के छ र पर्यटन स्थलहरू त्यो भ्रमण गर्न सकिन्छ। को Storfjorden गाउँ यो टाढाको ठाउँमा छ र यसको वन्यजन्तुहरूको लागि लोकप्रिय छ जुन तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ ह्वेल र डल्फिन जब तपाईं पानीमा बाहिर जान सक्नुहुन्छ। साथै जाडोमा यो स्की गन्तव्यको रूपमा धेरै लोकप्रिय छ र एक गन्डोला छ जुन पहाडमा उक्लन्छ fjord र सन्न्मोर आल्प्सको अद्भुत दृश्यहरू प्रदान गर्न।
होजोरान्डजर्जडको विरलै प्रायः पानीको माध्यमबाट तपाईं साना डु boats्गा, टुर ताल, हिमाली फार्म र सुपर शान्त ग्रामीण समुदायहरूमा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ। नर्वेजियन सार प्रसिद्ध हेर्न नेदरल्याण्डियन स्ट्याभ चर्चहरू क्षेत्र मा यो भ्रमण गर्न उत्तम छ Sognefjord। यस क्षेत्रमा त्यहाँ यी ancient वटा पुरातन र मूल्यवान गिर्जाघरहरू छन् र सब भन्दा पुरानो, अर्नेस १२ औं शताब्दीको हो र युनेस्कोको सुरक्षामा छ।
माथि हामीले कुरा गर्यौं फ्लेम रेलवे र उरलँड्सफोर्डको किनारमा उही नामको गाउँ। यो सुरु beautiful र ठाडो परिदृश्यहरूको माध्यमबाट एक सुन्दर रेल सवारी हो। यो Kjosfossen झरना मा रोकिन्छ, साथै।
अर्कोतर्फ, साइटहरू मध्ये एक, यो भनिएको छ, फ्रोजेनको केही परिदृश्यहरु लाई प्रेरित गर्‍यो, डिज्नी फिल्म, नायरीफ्जर्डमा छ। विचित्र सानो Gudvangen गाउँमुश्किलले सयौं व्यक्ति बाँचिरहेका छन्, यो गुफाहरूको श्रृंखलाको प्रवेशद्वार हो जुन खोजी गर्न सकिन्छ।
हामी पनि कुरा गर्छौं पल्पिट, Prekeistolen,aचट्टानी प्लेटफर्म जुन fjord मा बालकनी जस्तो देखिन्छ। तपाईं यो पहुँच गर्न केहि समय चढाई छ तर यो लायक छ। के तपाईंले मिसन असम्भव नतीजा देख्नुभयो? खैर, यो हो जहाँ टोम क्रूज हेनरी क्याभिल झगडा गर्दछ।
यदि सिनेमा तपाईंको कुरा हैन भने, हुनसक्छ viking ईतिहास? त्यसका लागि ऊ ईर्दफजर्ड भन्ने गाउँतिर लाग्छ जुन हर्डेन्जरफर्जर्डको किनारमा छ। यहाँबाट तपाईं एक सुन्दर सानो ट्रेन लिन सक्नुहुनेछ जुन minutes० मिनेटमा एकमा पुग्छ वाइकिंग दफन साइट, हरेडमा।
यी स्थानहरू केहि धेरै पर्यटन गन्तव्यहरू हुन् जुन तपाईं नर्वेलीय फजर्डहरूमा भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » नर्वे » नर्वेलीयन फजर्डहरू के हुन्?
के हेर्ने र कसरी लुकारामा पुग्ने